BBC Somali - Warar - Ciidan loo diyaarinayo Mali
Ciidan loo diyaarinayo Mali
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 Oktoobar, 2012, 15:29 GMT 18:29 SGA
Islaamiyiinta Mali ayaa doonaya inay soo rogaan xukun Islaami ah oo adag.
Waddamada Galbeedka Afrika ayaa isku diyaarinaya inay dhameeyaan qorshe milatari oo looga saarayo Islaamiyiinta qabsaday waqooyiga Mali horaantii sanadkan.
Golaha Amaaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka cosaday waddamada galbeedka Afrika inay keenaan qorshahooda milatari afartan iyo shan maalmood gudahooda, laakiin ilaa hadda wadamo yar ayaa sheegay inay ciidamo keenayaan.
Toddobaadkan dhamaadkiisa ayaa waxaa Mali ku kulmi doona Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika iyo wakiilada galbeedka Afrika si ay u dajiyaan Istaraajiyad milatari.
Afrika Liberia:Dad weeraray xarun Ebola
Obama: Adduunku wuu ka naxay dilka Foley
20 Agoosto 2014
Qoyska hoggaamiyaha milateri ee Xamaas oo la weeraray
Carlo Tavecchio oo wajahaya baaritaano